Dawladda Jarmalka oo dib u dhigay shirkii Israa’iil taasoo u muuqata ficil celin dhanka sharciga degsiimooyinka ee dhulka Falastiin. - iftineducation.com
Dawladda Jarmalka oo dib u dhigay shirkii Israa’iil taasoo u muuqata ficil celin dhanka sharciga degsiimooyinka ee dhulka Falastiin.
aadan21 / February 16, 2017
iftineducation.com – Dawladda Jarmalka ayaa dib u dhigay shir la qorsheeyay oo ay kula kulmi rabeen saraakiisha taliska Israel iyadoo lagu soo waramayaa in arintani ay ka danbeeso madax adeega xukuumada Tel Aviv ee baaqyada caalamiga ah – oo ay ku jiraan Jarmalka – oo ugu baaqay in ay joojiyaan degsiimooyinka sharci darada ah ee dhulka Falastiiniyiinta. Hogaamiyaha Jarmalka Chancellor Angela Merkel iyo saraakiil kale oo sare ayaa la qorsheeyay inay la kulmaan Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo golihiisa bisha May 10 keeda magaalada al-Quds.
Afhayeenka xukuumadda Jarmalka, ayaa si kastaba ha ahaatee, u sheegay AFP Isniintii in shirka dib loo dhigay ilaa sanadka soo socda. ” Inkastoo Afhayeenka uu sheegay in dowladda Jarmalka ee jadwalkeeda oo mashquul badan ay sabab u tahay dib u dhaca,
Wargayska maalinlaha Haaretz ee Israeli ayaa lagu sheegay in dib u dhaca loogu tala galay in ay u muujiyaan Israa’iil in hogaamiyaha Jermalka Merkel ay ku “qanacsaneyn” sharciga dhawaan-la ansixiyey ee u ogolaanaya Yahuuda inay boobaan dhulka Falastiin ee Daanta Galbeed
Dowladda Masar oo ku soo biirtay wadamada iskaashiga la sameenaya Madaxweyne Farmaajo!(Daawo